Toriteny Alahady faha-4 Febroary 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
« Misy antony ambony ny fijaliana»
Ry havana, mitohy hatrany ny fandalinantsika ny finoana, ary indrindra ny androany dia mikasika ny fiainantsika andavanandro satria na iza na iza mandalo eto amin’ity tany ity dia tsy maintsy mandalo amin’izay fijaliana izay.
Ny fanontaniana manitikitika antsika voalohany dia ny hoe : avy aiza ny fijaliana ? Andriamanitra tsy nahary zavatra ratsy na dia iray aza satria izay nohariany rehetra dia hitany fa tsara avokoa. Fa ny satana no nitondra ny ratsy mba hanelingelina ny fiainan’ny olombelona mba tsy hiantehitra amin’Andriamanitra.
Ny tenin’Andriamanitra telo omen’ny Fiangonana antsika anio no hoentintsika mandalina ity lohahevitra ity.
Ny voalohany dia nalaina tao amin’ny bokin’i Joba (mitantara ny fiainam-panahin’i Joba teo anatrehan’ny fijaliana izay nahazo azy) :
Tany am-boalohany dia nifikitra sy natahotra an’Andriamanitra, nanana ny vady aman-janany ary nanan-karem-be i Joba. Notsapan’Andriamanitra anefa izy ka noesorina taminy daholo ny fananany rehetra saingy tsy nanome tsiny an’Andriamanitra izy. Nalaina taminy avokoa ny zanany ary lasa boka izy, narary mafy ka ny ainy sisa no tsy niala, nefa vao maika aza izy nifikitra tamin’Andriamanitra satria ao amin’Andriamanitra no misy ny fiainana sy ny soa rehetra. Noho izay tsy fivadihan’i Joba tamin’Andriamanitra izay dia naverin’Andriamanitra avo roa heny ny fananany, naverina taminy ny zanany ary nampitomboan’Andriamanitra 140taona ny andro niainany.
Toky lehibe ho antsika izany nahazo an’i Joba izany ary ohatra lehibe ho antsika ny fifikirany tamin’Andriamanitra. Ka izay tsy fivadihana amin’Andriamanitra izay no manazava ny hoe : « Misy antony ambony ny fijaliana », ao anatin’izany no mitombo ny finoantsika an’Andriamanitra, ny fianteherantsika aminy ary ny fahatahorantsika azy. Ny olona mifikitra amin’Andriamanitra dia mahita vahaolana mandrakariva ary tsy avelany ho irery.
Ny faharoa dia nalaina tao amin’ny taratasin’i Md Paoly ho an’ny Kôrintianina. Ny Kôrintianina dia vahoaka mifamezivezy ; ka nisy olona Jody tao izay lasa Kristianina, nisy koa ireo olona efa nanana Andriamanin-kafa talohan’ny naha-Kristianina azy. Ka nandritra ny nitorian’i Md Paoly ny Vaovao Mahafaly dia nahatsiaro ho nijaly izy : vaky sambo, nenjehina… saingy tsy nahasakana azy izany satria ny tao an-tsainy dia ny hoe ny hitory ny Vaovao Mahafaly no niantsoan’i Kristy azy.
Ny hafatra lehibe tian’i Md Paoly ambara ary dia ny hoe : « Mila loza aho raha : tsy mitory ny Evanjely, tsy mitory an’i Kristy, tsy mitondra ny fahazavana lehibe izay noentin’i Kristy » izany hoe : zavatra tsy maintsy atao ary tsy maintsy iainana ny fitoriana ny Evanjely amin’ny alalan’ny fiainantsika andavanandro.
Ny fahatelo farany dia ny Evanjely nosoratan’i Marka. Ny mampiavaka an’i Md Marka moa dia ny fanamarihana tsara ny toerana sy ny fotoana. Amin’ny Jody moa ny andro sabata dia tsy azo hiasana fa natao hivavahana sy hitsaharana. Ka ny hoe « Sabata maty masoandro », amin’ny Jody, dia midika hoe andro voalohany amin’ny herinandro. Tamin’io fotoana io vao noentina nankeo amin’i Jesoa daholo ireo marary. Efa manambara amintsika sahady ny andro voalohany ao amin’ny boky Jenezy izany, dia ny fahariana ; fa eto izy dia hoe fandavorariana ny asa efa natombok’Andriamanitra tany amin’ny boky Jenezy. Manaraka izany dia tsara ho azavaina koa ny fandaharam-potoanan’i Jesoa : Rehefa avy mivavaka ao amin’ny Sinagôga izy ny hariva dia manasitrana ; ary ny maraina alohan’ny maneno akoho dia mankany amin’ny toerana mangingina izy mba hivavaka. Ka izay no anentanana antsika mba haka tahaka ny fandaharam-potoanan’i Jesoa : misy ny fotoana hivavahana, misy ny fotoana hiasana …
Ny lesona azo alaina avy amin’io Evanjely io dia ny hoe :
Antsoina isika rehefa mahazo fahasoavana mba hanantona an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka, asa, fiainana ;
Ny demony no fototry ny ratsy ka raha manaiky rebireben’ny demony ianao dia tonga ao aminao ny hakamoana, ohatra, ka indraindray ny sitrapontsika no asaintsika ataon’Andriamanitra nefa ny sitrapon’Andriamanitra no tokony ho arahintsika sy ataontsika
Ny Sakramentan’ny Fanosorana ny marary